बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरु, ओली पनि सहभागी | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, मंसिर ०३, २०७७ १३:४९:१०
काठमाडौं / सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक सुरु भएको हो । एक बजेका लागि बाेलाइएकाे बैठक केही ढिला गरी सुरु भएकाे हाे ।